Nimanka tacadiga gabdhaha u geysta oo la doonayo in la calaamadiyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Överfall, övergrepp, sexbrott, våldtäkt Foto: Heiko Junge/TT
Nimanka tacadiga gabdhaha u geysta oo la doonayo in la calaamadiyo
La daabacay tisdag 29 september 2015 kl 09.44
Taclinta amba aqoonta loo hayo dembiyada la xidhiidha sharaf dhawrka amba af Iswiidhishka lugu yidhaaho hedersrelaterat våld ayaa liita.
Islamarkaas na ay dembiyada la xidhiidha arrimahan ka muqan tirokoobka booliska. Sababta awgeed ayaa booliska iyo xeer ilaaliyaha lugula tallinaya in ay qofkan sharci darro dan qof kale u geysta la calaamadiyo. Waa siday dhowr cilmi baadhe iyo baadhaha dawladda arrimaha la xidhiidha hablaha tacadiga loo geysto hadalka u soo dhigeen.
Dembiyada la xidhiidha sharaf dhawrka ayaa ah arrin aan Iswiidhan ku cusbeeyn. In kasta oo ay muddo dheer soconaysay ayaa aqoonta dembiyadan loo hayo weli ah mid liidata, khasatan habka caddaaladda iyo qeeynuunka u disanyahay , rättsväsende.
Cilmi baadhahan iyo qofka dawladda u qaabilsan arrimaha la xidhiidha hablaha tacadiga loo geysto ayaa u jeeda, in lugu bilaabin in qeeynuunka la bedelo, wa in marka hore lugu bilaabo in taclinta amba aqoonta loo kordhiyo heeyadaha waddanka, garahaan habka nimankan loo baadho marka dembigan lugu tuhunsanyahay.
Xagaagan ayey dawladda waddanka hogaamisa shaacisay baadhitan arrimahan ku saabsan. Halkan oo ay ku jireen dhowr hindise oo ka hadlaya si loo joojinlaha dembiyadan. Baadhitaankan ayaa sheegay in u faraq weyn ka dhexayo si ay gobolada amba degmooyinka waddanka arrinkan u xallinyan iyo aqoonta ay halkan ku haystaan, gaarahaan heeyada iyo booliska oo arrimahan ku liita. Tan ayaa si xun u saameeynaysa dhawrista ama ilaalinta muwaaddiniinta, Waa siday dhowr cilmi baadhe iyo baadhaha dawladda arrimaha la xidhiidha hablaha tacadiga loo geysto hadalka u soo dhigeen.